UCaster uzogijima kuma-Olympic eTokyo
UCASTER Semenya osememezele ukuthi ufuna ukugijima kwi-200m kuma-Olympic Games okulindeleke abeseTokyo, eJapan Isithombe: AP
NHLANHLA SITHOLE | March 16, 2020
IMBAMBEZELA yokuphuma kwesinqumo senkantolo yaseSwitzerland yokuDluliswa kwamaCala ngodaba olungundaba mlonyeni phakathi kweWorld Athleitcs (WA) ebiyaziwa nge-IAAF noCaster Semenya, sekuholele ekutheni athathe isinqumo sokushintsha ibanga afuna ukugijima kulona njengoba kuwunyaka wemidlalo yama-Olympic.
I-Swiss Federal Supreme Court of Appeal kufanele yehlulele ngesinqumo se-World Athletics sokuthi abagijimi besifazane abaphila nesimo sikaSemenya ngenxa yemizimba yabo ekhiqiza i-testosterone, eningi bangalibambi iqhaza emijahweni yamabanga aphakathi.
USemenya ungumpetha wama-Olympic ebangeni eliwu-800m kanti uphinde agijime kweliwu-400m.
Lesi sinqumo sikaSemenya kungenzeka ukuthi yinkomba yokuthi usehosha imfe empini yomthetho abeyibhekise kwiWorld Athletics ngokuthi ezame eliwu-200.
Okungaziwa wukuthi ngabe lesi sinqumo uSemenya usithathe ngokwelulekwa yithimba lakhe lezomthetho yini.
Esitatimendeni esikhishwe yiMasai Athletic Club esungulwe nguye sithe: “Selokhu ngabona imidlalo yama-Olympic ayeseBeijing ngo-2008 kwithelevishini ngaba nomdlandla wokuthi ngigijime ezingeni lale midlalo (Olympic). Ukunqoba indondo yami yokuqala emhlabeni kwi-800m ngesikhathi ngiseyijuniya ngo-2008 Commonwealth Youth Games, e-India. Eminyake ewu-11 elandela lapho nganqoba indondo yegolide kuyona yonke imiqhudelwano esezingeni lomhlaba okuhlanganisa ama-Olympic Games, World Championships, Commonwealth Games, Diamond League nama-African Championships.”
Siqhube sathi kodwa kuyaziwa ukuthi ngeke akwazi ukuqhudelana nabanye ebangeni eliwu-800m ukuze avikele isicoco sakhe kuma-Olympic Games azokuba seTokyo makhathaleni nonyaka.
“Iphupho lami njalo futhi liyoqhubeka libe wukuthi ngiqhudelane nabanye ezingeni eliphezulu kwezemidlalo ngakho ukuze ngilifezekise leli phupho. Yingakho senginqume ukushintsha amabanga ngokuthi ngijime kwi-200m. Lesi sinqumo asibanga yinto elula kodwa njengoba ngaso sonke isikhathi ngibheke phambili kule nselelo. Ngizosebenza kanzima ngakho konke okusemandleni ukuzibekela indawo eTokyo ukuze ngikwazi ukumela iNingizimu Afrika,”kuphetha isitatimende.
UMzamo Sepeng, obemcija emabangeni aphakathi utshele Isolezwe ngeSonto ukuthi ngeke akwazi ukuphawula ngesinqumo sikaSemenya ngoba uselolongwa nguKoketso (Mogapi).
“Nakuba siziqeqesha sonke kodwa mina ngeke ngikwazi ukuphawula ngoba mina bengimsiza emabangeni aphakathi.
“Kuleli banga asezoligijima usesizwa nguKoketso okunguyena oyincushe kulona,” kusho uSepeng.